SINOPED Professional Pharma စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်သူများ
ကုမ္ပဏီသည် ဆေးဝါးစက်ပစ္စည်းများအတွက် အဆင့်မြင့် အထူးစီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ကိရိယာများ ရှိသည်။
Hard & softgel Capsule ဖြည့်စက်
Rotary Tablet နှိပ်စက်
Powder Filling Line စက်
တရုတ်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (sinoped) Co. , Ltd ။ ယခု R ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်&Liaoyang ဆေးဝါးစက်စက်ရုံ, နယူးတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက်ပစ္စည်းစက်ရုံထုတ်လုပ်ပထမဦးဆုံးအစိုးရပိုင်ဆေးဝါးအတွက် centrifugal ၏: D နှင့်ထုတ်လုပ်မှု။ ကျနော်တို့နီးပါးသောင်းချီဖောက်သည်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, 50 နှစ်ကြာဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာအာရုံစိုက်, ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ ဈေးကွက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဆေးဝါးစက်ယန္တရားထံအပ်နှံအဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကျနော်တို့ထူးချွန်ဘို့ကြိုးစားကြသည်။ လူရာပေါင်းများစွာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံအသင်းကိုပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စေသည်။ R ကိုပေါင်းစပ်အဆိုပါ mode ကို&: D, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ကျေနပ်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုစိုးရိမ်-အခမဲ့စေသည်သာ။
FLG အရည်အိပ်ရာ အလုံပိတ် Granulation ချိတ်ဆက်မှု ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
FLG အရည်အိပ်ရာ အလုံပိတ် Granulation ချိတ်ဆက်မှု ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမိတ်ဆက်အသေးစိတ်အား အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုပါ။https://www.alibaba.com/product-detail/China-Pharmaceutical-Fluid-bed-continuous-fluid_60586863855.html?spm=a2747.manage.0.0.149c71d27MPrngGEA Pharmaceutical Vertical Continuous Fluid Bed dryer ၏ အားသာချက်မှာ ထုတ်လုပ်မှု၏ ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကြား စံပြချိန်ခွင်လျှာကို ထင်ဟပ်စေသည့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ညီညာမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် တည်ရှိပါသည်။ Fluidization လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပစ္စည်းများသည် လေအပေါ်တွင် ပျံတက်ကာ မျက်နှာပြင်ကို အပူပေးသောလေနှင့် အပြည့်အဝ ထိတွေ့ပြီး ပစ္စည်းများကို အညီအမျှ စားသောက်ပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားစေရန် အပူဖလှယ်ရန်အတွက် စံပြအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ သင့်လျော်သော ဖြန်းခြင်းစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအားဖြင့်၊ ထို့နောက် အရည်အိပ်ရာသည် အခြောက်ခံခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် အမှုန့်ကို လိမ်းခြင်း၏ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဘက်စုံသုံး စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ရုံတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည် များသောအားဖြင့် ချက်ချင်းပျော်ဝင်နိုင်သော granule ဖြစ်သည်။
ZPW-25 Rotary Effervescent တက်ဘလက်စာနယ်ဇင်း
ZPW စီးရီး Tablet ကိုစာနယ်ဇင်း Effrvescent Tablet ကိုတိုက်ရိုက် effervescent တက်ဘလက်သို့စာနယ်ဇင်း granules များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ပြီးနောက်ဝက်အူအမျိုးအစားလာကြတယ်,&အထူးအပြောင်းအလဲနဲ့, ထိရောက်စွာလာကြတယ်မှ Powder Stick ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာပစ္စည်းများအတွက်ပိုကောင်းသက်ရောက်မှုထဲမှာပါတဲ့, ပိုဆိုးစီးဆင်းမှုဖြစ်ကြသည်လွယ်ကူသောအစိုဓာတ်ကိုရန်, ကျယ်ပြန့်ဆေးဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုအထူး de-ကိုပုံသွင်းလမ်း, မွေးစားရှိပါတယ်။
NJP 800 Capsule ဖြည့်စက်
ဆေးတောင့်ဖြည့်စက်သည် အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားမှုဖြစ်ပြီး အပြည့်အ၀ အလိုအလျောက် ဆေးတောင့်ဖြည့်သည့် ကိရိယာကို ဖြည့်သွင်းသည့် အပေါက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်ဆေးပညာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် GMP လိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံထားပြီး၊ ၎င်းတွင် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ယန္တရား၊ သေးငယ်သော အသံအတိုးအကျယ်၊ ဆူညံသံနည်းပါးမှု၊ တိကျစွာဖြည့်သွင်းသည့်ပမာဏ၊ ဘက်စုံသုံး၊ တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်ခြင်း စသည်တို့ကို လက်ခံထားသည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အပြီးသတ်နိုင်သည်။ : capsule feeding, capsule separating, powder filling, capsule rejecting, capsule locking, finish capsule discharge and module cleaning စသည်တို့။ ဤစက်သည် မော်ဒယ် NJP-1200 အလိုအလျောက် ဆေးတောင့်ဖြည့်စက်ကို အခြေခံ၍ ထုထည်-ထုတ်လုပ်ခြင်း ပြည့်မီရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသော ရုတ်သိမ်းသည့် ယန္တရားသည် ထုထည်-ထုတ်လုပ်လိုသော လုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လူအင်အားကို သက်သာစေပါသည်။
တရုတ်ထံမှစိတ်ကြိုက်ဖျ Gel encapsulation တွေကိုသေချာစက်ထုတ်လုပ်သူ | Sinoped
HSR-180H / 200H / 250H / 300H စီးရီး softgel ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည် requirements.The ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သင့်လျော်သောဖောက်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အနိမ့်စားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစားအသောက်, ဆေးဝါး, အလှကုန်, paintball နှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
အရည်ကြည်ဖုများကို ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ကာတွန်းဆွဲစက်
JDZ-260 အဆက်မပြတ်အမျိုးအစား မြန်နှုန်းမြင့် ပုံးပုံးပုံးစက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ အသစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး GMP စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းရည်မြင့်မားမှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။ လက်ကမ်းစာစောင်၏ အလိုအလျောက်ခေါက်ခြင်းအပါအဝင် နည်းပညာများစွာ၊& conveying၊ boxes forming နှင့် post pushing unit စသည်တို့သည် ဥရောပနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။& အမေရိကန်စံနှုန်း။ သပ်ရပ်သောအသွင်အပြင်နှင့် ပို့စ်ကို အဆက်မပြတ်တွန်းပို့သည့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် အဆင်ပြေသည်။ 4-indexing double-planet-wheel ၏ပြင်ပ-ကွင်းပတ်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ၊ သေတ္တာများကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ နှစ်ကြိမ်ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားသောကိရိယာများပါရှိသောကြောင့်သေတ္တာများကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ကိုသေချာစေသည်။ဤစက်တွင် စက်/အလင်း/လျှပ်စစ်/နယူးမက်တစ် ထိန်းချုပ်မှုအား တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို အခြားလိုက်ဖက်သောစက်များနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်အိတ်အရည်ဖြည့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ရုံ - SINOPED
အလိုအလျောက်အရည်ဖြည့်ထုပ်ပိုးစက်အရည်ဖြည့်ပန့်၊ အိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ရက်စွဲပုံနှိပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ထုပ်ပိုးမှုအမြန်နှုန်း 30 မှ 50 အိတ် / မိနစ်ပေးပို့ချိန် 25 ရက်မော်ဒယ်နံပါတ် 320၊ 420၊ 520၊ 620 နှင့် 720အိတ်အနံ 15cm မှ 35cm ထိရှိသည်။
SGGZ-8 ဖြည့် Mashine ခံတွင်းအရည် Bottle သ, သတ္တုပလတ်စတစ်ဝက်အူ Cap ဖြည့်စွက် Capping စက် Capping2ခေါင်းဆောင်များ
* (အလိပ်) အဓိကအား 20/30/50/60 အတွက်အသုံးပြုစက် / 100ml ဖန်ပုလင်း, သတ္တုချည်ဦးထုပ်ရဲ့အဆာ, capping ဒီစီးရီးပါးစပ်အဆာ (အလိပ်) capping, ဦးထုပ် add;* ဒီစီးရီးစက် system ကိုဖြည့်နှင့် (လိပ်) စနစ် capping တိကျမွငျ့မားမရှိသည်လည်းဖြည့်စွက်, ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ကှကျကှကျကှငျးကှငျးခံပြီးလျက်ရှိ၏* Capping (လိပ်) ဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမူပိုင်ဖြစ်ပါသည် strucProfessional က SGGZ-8 စျေးကွက်အပေါ်အလားတူထုတ်ကုန်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် Mashine ခံတွင်းအရည် Bottle သ, သတ္တုပလတ်စတစ်ဝက်အူ Cap ဖြည့်စွက် Capping စက်ထုတ်လုပ်သူဖြည့် Capping2ခေါင်းဆောင်များကြောင့်စသည်တို့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်, အရည်အသွေး, အသွင်အပြင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆုံးသောထူးချွန်အားသာချက်ရှိပါတယ်, ပြီးအတော်ပင် အဆိုပါ market.Sinoped အတွက်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုလွန်ခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်များ၏ချို့ယွင်းချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Professional က SGGZ-8 ၏သတ်မှတ်ချက်များ Mashine ခံတွင်းအရည် Bottle သဖြည့် Capping2ခေါင်းဆောင်များ, သတ္တုပလတ်စတစ်ဝက်အူ Cap ဖြည့်စွက် Capping စက်ထုတ်လုပ်သူကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ture, ထုပ်ပိုးများ၏အရည်အသွေးသေချာချောမွေ့ထိရောက်စွာ (လိပ်) capping ။
စိတ်ကြိုက်သန့်ရှင်း ROOM တွင်တရုတ် မှစ. 1 ထုတ်လုပ်သူ
ဤသည် GMP တောင်းဆိုမှုကိုအောက်မှာစင်ကြယ်တဲ့အခန်းအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ Turnkey စီမံကိန်းကို။ တစ်ဦးက Cleanroom သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထိုကဲ့သို့သောဖုန်မှုန့်, လေကြောင်းချီပိုးမွှား, Aerosol အမှုန်တွေနဲ့ဓာတုပစ္စည်းအငွေ့အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတဲ့အနိမ့်အဆင့်အထိရှိကြောင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများတွင်အသုံးပြုတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောတိကျစွာတစ် cleanroom တစ်သတ်မှတ်ထားသောအမှုန်အရွယ်အစားမှာကုဗမီတာလျှင်အမှုန်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင်း contaimination တစ်ထိန်းချုပ်ထားအဆင့်အထိရှိပါတယ်။ တစ်ဦး ISO1 cleanroom ကြောင်းအရွယ်အစားအကွာအဝေးမမှုန်ခွင့်ပြုနှင့်သာ 12 နေစဉ်ရှုထောင့်ပေးစေခြင်းငှါ, ပုံမှန်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပြင်ဘက်တစ်ဦး ISO9 cleanroom မှသက်ဆိုင်ရာ, 35.000.000 အရွယ်အစားအကွာအဝေး 0.5um အတွက်ကုဗမီတာလျှင်အမှုန်များနှင့်အချင်းအတွက်ပိုမိုကြီးမားပါရှိသည် ကုဗ 0.3um ၏မီတာနှင့်အသေးငယ်နှုန်းမှုန်
လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ကောင်းသောအကြွေးများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကြောင့်အကြီးအအောင်မြင်မှုများစေပြီ။ ကျနော်တို့အများကြီးဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ရပ်ခြားဖောက်သည်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ဆေးဝါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝယ်ယူအေဂျင်စီဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခနျ့အပျခဲ့ကြ& တရုတ်ကုမ္ပဏီများထုတ်လုပ်ဆေးဝါး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဝါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ကိုရီးယား, အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, ပါကစ္စတန်, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်, အီရန်, ဂျပန်, ဒိန်းမတ်, ရိုမေးနီးယား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရုရှား, တောင်အာဖရိက, နိုင်ဂျီးရီးယား, ယူအက်စ်အေ, သြစတြေးလျ, ကနေဒါ, အာဂျင်တီးနားအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားဒေသများ, တင်ပို့နေကြသည် နှင့်ချီလီ။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများအပြင်, ငါတို့သည်လည်း, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများထောက်ပံ့ key ကိုစီမံကိန်းများကိုဖွင့်နှင့်-ဘယ်လိုသိကြ၏။
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ Turnket Project Capsule တက်ဘလက်စက်ရုံ
Capsule နှင့် Tablet အတွက် Turnkey ပရောဂျက်၊ သန့်ရှင်းသောအခန်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း အပါအဝင်၊အဲဒါကို 2020 မှာလုပ်ခဲ့ပြီး 2021 မှာ အပြီးသတ်မှာပါ။SINOPED သည် ဒီဇိုင်း၊ စက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု (တက်ဘလက်နှိပ်ခြင်း၊ ဆေးတောင့်ဖြည့်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုများထုပ်ပိုးခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်း၊ Fluid bed granualting၊ water treatment၊ Clean Room စသည်တို့) ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။အခု စက်ရုံက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။လာရောက်ကြိုဆိုပါတယ် !
ဗီယက်နမ်ရှိ Capsule ဖြည့်စက်
အရည်၊ အမှုန်အမွှားများနှင့် အမှုန့်များ စသည်တို့ဖြင့် ပြည့်နေသော မာကျောသောတောင့်များကို ကော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ရန် ကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုပ်ပိုးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမြဲတမ်းတံဆိပ်ခတ်ထားနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် volatiledrugs များမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုကို ထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်၊ ဆေးတောင့်များ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဆေးဝါးများ၏ ဘေးကင်းမှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် ဆေးဝါးများ၏ သက်တမ်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် ဆေးဝါးလုပ်ငန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေး အာမခံချက်လည်းဖြစ်သည်။
EU Food Tablet ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဤသည်မှာ GMP တောင်းဆိုမှုအရ သန့်ရှင်းသော အခန်းတွင်း ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံ တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တူရကီစီမံကိန်း။သန့်စင်ခန်း သို့မဟုတ် သန့်စင်ခန်းသည် ဖုန်မှုန့်များ၊ လေထုမှအဏုဇီဝများ၊ လေထုမှုန်များနှင့် ဓာတုအငွေ့များကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်နိမ့်ကျသော ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် သိပ္ပံသုတေသနတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုတိကျစွာ၊ သန့်စင်ခန်းတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ထားသော အမှုန်အရွယ်အစားရှိ ကုဗမီတာတစ်ခုလျှင် အမှုန်အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ရှုထောင့်အရကြည့်ရန်၊ ပုံမှန်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြင်ပလေတွင် အရွယ်အစားအပိုင်းအခြား 0.5um နှင့် ပိုကြီးသောအချင်းတွင် တစ်ကုဗမီတာလျှင် အမှုန်အမွှား 35,000,000 ပါ၀င်သည် 0.3um နှင့် ပိုသေးငယ်သော ကုဗမီတာလျှင် အမှုန် 12 ခု။
FL Food Grade Stevia Sugar Production Line နည်းပညာ၏ အားသာချက်မှာ ထုတ်လုပ်မှု၏ ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကြား စံပြချိန်ခွင်လျှာကို ထင်ဟပ်စေသည့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် တည်ရှိပါသည်။ Fluidization လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပစ္စည်းများသည် လေအပေါ်တွင် ပျံတက်ကာ မျက်နှာပြင်ကို အပူပေးသောလေနှင့် အပြည့်အဝ ထိတွေ့ပြီး ပစ္စည်းများကို အညီအမျှ စားသောက်ပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားစေရန် အပူဖလှယ်ရန်အတွက် စံပြအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ သင့်လျော်သော ဖြန်းခြင်းစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအားဖြင့်၊ ထို့နောက် အရည်အိပ်ရာသည် အခြောက်ခံခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် အမှုန့်ကို လိမ်းခြင်း၏ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဘက်စုံသုံး စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ရုံတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည် များသောအားဖြင့် ချက်ချင်းပျော်ဝင်နိုင်သော granule ဖြစ်သည်။
ဆေးဝါးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ -တရုတ်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (sinoped) Co. , Ltd မှ
တရုတ်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (sinoped) Co. , Ltd ။ R ကိုအထူးပြုတဲ့အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး&: D, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဆေးဝါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ယန္တရားများ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဝါးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ တရုတ်အတွက်ဒါဟာ centrifugal အမျိုးမျိုး centrifugal ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ပြွန် centrifugal နှင့် disk ကို centrifugal အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသုံးအတော်များများကမျက်စိ centrifugal အဖြစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အထူးပြုတစ်ဦးကဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္မဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင်များအများအပြားရှိပါတယ်, ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သောအဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးသားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အထုတ်ကုန် installation နဲ့ဒီဘာဂင်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်းကို XXXXX တွင် ဆက်သွယ်ပါ။